Targus – Page2– ICT.com.mm
Targus 15.6-inch Business Casual SlipcaseK28,433
Targus 15.6-inch Element BackpackK50,000 K25,000-50%
Targus 15.6-inch Terra Laptop BackpackK50,000 K25,000-50%
Targus CityGear Convertible Laptop Backpack 15.6-inch (Black)K89,000 K44,000-51%
Targus CityGear Laptop Sleeve 13.3-inch (Black)K27,000 K14,000-49%
Targus Groove X2 Compact Backpack 15-inch (Navy)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSB95201GL-70 Clever internal capacity with separate storage spaces for your tech and everyday items Tech-friendly laptop cradle offers Targus’ Sling Protection™, it suspends your hardware...
Targus Groove X2 Max Backpack 15-inch (Navy)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSB95101GL-70 Item Code: AC1350006 Clever capacity means you only need to carry one bag. Maximum storage, minimalist style. Tech-friendly laptop cradle offers Targus’ Sling Protection™,...
Targus Groove X2 Slim Case 13-inch (Charcoal)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSS979GL-70 Tech-friendly slim laptop bag offering Targus-grade protection Designed for MacBook 13” it fits any laptop up to 13” Large zipped compartment plus front pocket...
Targus Groove X2 Slim Case 15-inch (Charcoal)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSS978GL Item Code: AC1350049 COMPATIBILITY: Up to 15" laptops Tech-friendly slim laptop bag offering Targus grade protection Designed for MacBook 15” it fits any laptop up...
Targus Groove X2 Slim Case 15-inch (Navy)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSS97801GL-71 Tech-friendly slim laptop bag offering Targus-grade protection Designed for MacBook 15” it fits any laptop up to 15” Large zipped compartment plus front pocket...
Targus Incognito Backpack 15.6-inch (Olive)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSB162AP-70 Designed to fit laptops up to 15.6” Zippered pockets to accommodate laptop equipment and personal items, incl. documents and electronic devices Front secret pocket...
Targus Intellect Laptop Backpack 15.6-inch (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TBB565GL-74 Item Code: AC1350029 Great value laptop backpack to fit up to 15.6″” laptops Side loading design with padded laptop compartment Clean square design Back...
Targus KM610 Wireless Keyboard and Mouse Combo
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AKM610AP-51 QWERTY keyboard with full-size, quiet-touch keys and media control Full-size high definition optical mouse with integrated scroll wheel Stow-n-Go® USB receiver connects both 2...
Targus Motor Laptop Backpack 16-inch (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSB194US-70 Works With: 16″ Laptops and Under Color: Black Style: Backpack Protection Level: Good Capacity: 33 Liters Overview The Targus Motor Backpack is designed to...
Targus P16 Wireless USB Presenter with Laser Pointer (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Long range 2.4GHz wireless technology provides true freedom for effective presentation has up toa50 feet range, which is ideal foralarge conference room. Features...
Targus P30 Wireless USB Presenter with Laser Pointer (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AMP30GL-50 Preset RF connection without the need forasoftware driver enables true plug-and-play capability Long range 2.4GHz wireless technology provides true freedom for effective...
Targus P30 Wireless USB Presenter with Laser Pointer (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AMP3001GL-50 Preset RF connection without the need forasoftware driver enables true plug-and-play capability Long range 2.4GHz wireless technology provides true freedom for effective...
Targus Sol-Lite Laptop Backpack 14-inch (Navy)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Streamline lightweight design with wide opening access to main compartment Contoured padded mesh back panel with air channel for carrying comfort Dual handle design as an alternative...
Targus Sol-Lite Laptop Backpack 14-inch (Rice Purple)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSB97203GL-70 Streamline lightweight design with wide opening access to main compartment Contoured padded mesh back panel with air channel for carrying comfort Dual handle design...
Targus Sol-Lite Laptop Backpack 15.6-inch (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Streamline lightweight design with wide opening access to main compartment Security hood design Dual handle design as an alternative carrying solution Ergonomic padded adjustable shoulder straps and...
Targus Sol-Lite Laptop Backpack 15.6-inch (Olive Green)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: TSB97102GL-70 Streamline lightweight design with wide opening access to main compartment Security hood design Dual handle design as an alternative carrying solution Ergonomic padded adjustable...
Targus USB Optical Mouse U660 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AMU660AP Compatible with Windows® and Mac® 1,600 DPI sensor foraperfect response to mouse movements 1.8M cord length Overview Targus U660 Optical Mouse’s 1600...
Targus USB Wired Numeric Keypad with Mac/Win
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Color: Black Compatibility: Win XP, Vista, 7, 8. Mac OS x 10.2 or later Material: Plastic Exterior Dimensions: 12.7 x 8.9 x 2.5cm Weight: 0.13 kg Warranty:...
Targus USB-C 4K HDMI Video Adapter With 100W Alt-Mode Power Delivery
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item code: ACA948AP-50 1 HDMI port supports up to 4K@30Hz resolution 1 USB-A 3.0 fast-charging port with up to 5Gbps data transfer speed* 1 USB-C port supports...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Connection Technology: USB 3.2 G1 Host Port Compatibility: USB-C Works With: Windows, Mac, and Chrome Ethernet: Yes Max Host Power: 100W Power Source: Pass-thru HDMI: 1 DisplayPort:...
Targus Wireless 4-Key Optical Mouse W605 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AMW605AP-51 2.4 GHz wireless technology 1600 DPI optical sensor foraperfect response to mouse movements Wireless USB receiver stores on bottom of mouse so...
Targus Wireless 4-Key Optical Mouse W605 (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AMW60501AP-51 2.4 GHz wireless technology 1600 DPI optical sensor foraperfect response to mouse movements Wireless USB receiver stores on bottom of mouse so...
Targus Wireless 4-Key Optical Mouse W620 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AMW620AP-51 2.4 GHz wireless technology 1600 DPI optical sensor foraperfect response to mouse movements Wireless USB receiver storage 3-Level DPI adjustment: 800/1200/1600 BlueTrace...
Targus Wireless 4-Key Optical Mouse W620 (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number: AMW62001AP-51 2.4 GHz wireless technology 1600 DPI optical sensor foraperfect response to mouse movements Wireless USB receiver storage 3-Level DPI adjustment: 800/1200/1600 BlueTrace...